Asomafo 16 NA-TWI - Timoteo kɔka Paulo ne Silas ho - Paulo - Bible Gateway
Asomafo 15Asomafo 17
Asomafo 16 Nkwa Asem (NA-TWI)
16 Paulo toaa n’akwantu no so kɔɔ Derbe ne Listra. Ɛhɔ na na gyidini bi a ne din de Timoteo a ne na yɛ Yudani gyidini na n’agya nso yɛ Helani no te. 2 Anuanom a na wɔwɔ Listra ne Ikonium no nyinaa dii Timoteo ho adanse pa. 3 Esiane sɛ na Paulo pɛ sɛ ɔde Timoteo ka ne ho kɔ nti, otwaa no twetia. Efisɛ, Yudafo a na wɔwɔ hɔ no nyinaa nim sɛ Timoteo n’agya yɛ Helani. 4 Kurow biara a woduu so no, wɔkaa mmara a asomafo ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem ahyɛ sɛ wonni so no kyerɛɛ wɔn. 5 Asafo no nyinii gyidi mu na daa nnipa pii bɛkaa wɔn ho.